Voot Select Originals, Bigg Boss, MTV, Colors TV အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（22.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Voot Select Originals, Bigg Boss, MTV, Colors TV
Voot သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပြပွဲများ, ရုပ်ရှင်နှင့်နာရီပေါင်းများစွာအကြောင်းအရာများကိုသယ်ဆောင်လာသည့် Viam18 ၏ Premium Premium Video-Impl ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
Supported Premium Pott app, Voot သည်နာရီပေါင်း 70,000 ခန့်ကိုနာရီပေါင်း 70,000 ကြာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအကြောင်းအရာများမှဂျုံလူမျိုးများ, ဘာသာစကားများနှင့်ပရိသတ်များအကြားစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဦး စားပေးမှုအမျိုးမျိုးရှိသူများအတွက်လက်ပတ်လုံး, MTV, အရောင်များအသင်္ချေ, အရောင်များတမီးလ်, အရောင်များ, အရောင်များ, အရောင်များ, အရောင်များ, အရောင်များ, အရောင်များ, အရောင်များ Gujarati နှင့် Coldy Central ။ အကယ်. အကြီးမားဆုံးသောအကြီးမားဆုံးသောမှတ်တိုင်များလုံးဝအခမဲ့မဟုတ်သော Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Non-Out ။
Voot Select Select, Premium နှင့် Exclium နှင့်သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှု။ Voot Selected သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ရပ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလက်တွေ့အင်္ဂါဇာတ်ကားများနှင့်အတူ 24 နာရီမတိုင်မီ 24 နာရီ, ခ> ။
VIACom18 ၏ကွန်ယက်လိုင်းများ (အပြည့်အဝဖြစ်စဉ်များနှင့်သီးသန့်ပါဝင်မှု) ကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုနှင့်အတူ Content Selects Selects နှင့် News of News Selections of News The News The News The News The Plut ကိုကြည့်ရှု Segments သင့်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးလက်နှင့်သီးသန့်လက်ငင်းရှိပြီး Voot Select တွင်သာဖြစ်သည်။ Arshad Warsi နှင့် Barun Sobti
ကဲ့သို့သောဒဏ္ my ာရီဆန်မှုကို Asur နှင့် Barun Sobti
ကဲ့သို့သောဒဏ္ my ာရီဆန်သောဖျော်ဖြေပွဲများကို Marizi
နှင့် DRAMAS တို့ဖြစ်သည်။ > Raikar ကိစ္စ
& b> တရားမဝင်ပါ။
fuh se fantasy fantasy နှင့်အချိန်ကုန်ခြင်းတို့နှင့်အတူအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသင်နှစ်သက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် SWARA Bhaskar ၏ကမ္ဘာသို့မလွယ်ကူပါ။
ဤအတောအတွင်းသင်၏ဘာသာစကားရှိမူရင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင် shock adlad
, ဘင်္ဂါလီရှိနောက်ဆုံးပေါ်မူရင်းနှင့် Siraaai
နှင့် နှင့် နှင့် ကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် tamil မူရင်းများဟုမထင်ပါနှင့်။
ကဲ့သို့သော Gordon Ramsony
ကဲ့သို့သော Top Gear Gear
Masterchef Usa တို့တွင် Masterson: Gordon Ramsey: Gordon Ramsey: Gordon Ramsey
USS) Heath Ledger
လမ်းကြောင်းများစွာသည် Voot Select နှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် Choti Sardaarni, MTIVSVilla, ဘရွတ်ကန်ကိုး 999999999999999999999999999999
Mujhse Shaadi Karogi, Bahu Begum, Bepannah Phaarratriatri Choti Sardaarni, Vish, Naagin S4, Shakti, Jhansi Ki Rani, Jhansi Ki Rani, Balika Vadhu, Ishq Ka Rang တို့နှင့်အတူအနှစ်သက်ဆုံး, BuNik Ka Rang တို့နှင့်အတူ Jhotubi, Jhansi Ki Rani တို့နှင့်အတူ!
နောက်ဆုံးပေါ်ရာသီဥတုများက Salman Khan Splitsvilla, Sunny Khtitsvilla, MTV Roadies, MTV လမ်းများ, Vogue နှင့်အတူ။ ပလက်ဖောင်းတွင်လည်းအိန္ဒိယ၏စွမ်းရည်ရှိသောအိန္ဒိယနိုင်ငံ, ထိပ်တန်းမော်ဒယ်အိန္ဒိယကဲ့သို့သောအခြားပြပွဲများကိုလည်းပေးထားသည်။
MTLV လုပ်ခြင်း, ကြည့်ရှုခြင်း, ကြယ်ပွင့်စတူဒီယို,
ပရိသတ်များသည်အရောင်အသွေးစုံလင်သော Agnisakshi, Radha Ramana, Seethmi Vallaha, Mangala Gowri Maduve, Maja Talkiud, အရောင်များမာရသီ၏ Bigg Boss Marathi, Heev Zala Yeda Pisa, jeev zala yeda pisa; အရောင်များ Gujarati ၏ Rasoi Show; Bangla's Resha's Resham Jhanpi နှင့် Kore Kore Bolbo
မည်သည့်မေးမြန်းချက် / ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြံဥာဏ် / အဆိုပြုလွှာများအတွက်မဆို [email protected] တွင် [email protected] တွင်ဆက်သွယ်ပါ။
Bigg Boss S15 Candy Voot Select Colors Tv